Browse through all the words.
Arranged by vowel groups.
"Sounds like" categories.
Color-coded parts of speech.
Google assisted internal search.
Google-translate other languages.
Learning English? Copy and pasteaword or the whole paragraph in English or Myanmar (auto detect) into Google Translate 🔊 with audio. Selectalanguage from the pull-down menu to translate the English words on the whole page into other languages.
DICTIONARY MAIN MENU
VOWEL A - အ - အာ - အား
က 'sounds like က' ကာ ကား ကျ ကျာ ကျား ကြ ကြာ ကြား ကွ ကွာ ကြွ ကြွား ခ ခါ ခါး ချ ချာ ချား ခြ ခြာ ခြား ခွ ခွာ ဂ 'sounds like ဂ' ဂါ ဂါး ဂျ ဂျာ ဂွ ဂွါ ဃ ဃာ င ငါ့ ငါ ငါး ငြာ ငြား ငှ ငှာ ငှား စ စာ စား စွ စွာ ဆ ဆာ ဆား ဆွ ဆွာ ဇ 'sounds like ဇ' ဇာ ဈ ဈာ ဉ ဉာ ည ညာ ညား ညှာ ဋ ဌ ဌာ ဍ ဎ ဏ တ 'sounds like တ or ဒ' တာ တား တွ တွား ထ 'sounds like ထ' ထာ ထား ထွာ ထွား ဒ 'sounds like ဒ' ဒါ ဒြ ဒွ ဒွါ ဓ ဓါ ဓါး န 'sounds like န' နာ နား နျာ နွား နှ 'sounds like နှ' နှာ နွှာ ပ 'sounds like ပ' ပါ့ ပါ ပါး ပျ ပျာ ပျား ပြ ပြာ ပြား ပွ ပွား ဖ 'sounds like ဖ' ဖာ ဖား ဖျ ဖျာ ဖျား ဖြ ဖြာ ဖြား ဖွ ဖွာ ဖွား ဗ ဗာ ဗား ဗျ ဗျာ ဗျား 'sounds like ဗြ' ဗြာ ဗြား ဘ sounds like ဘ ဘာ ဘား ဘွား မ 'sounds like မ' မာ မာ့ မား များ မြ မြား မွ မှ မှာ မှား မျှ မျှား မွှား မြွှာ ယ ယာ ယား ရ 'sounds like ရ' ရာ ရွ ရွာ ရှ ရှာ ရှား လ လာ လား လျ လျာ လျား လွ လှ လှာ လျှာ လွှ လွှာ လွှား ဝ 'sounds like ဝ' ဝါ ဝါး သ 'sounds like သ' သာ သား သွာ သွား သျှ သျှား ဿ ဟ ဟာ ဟား ဟွား ဠ အ အက အခ အဂ အဃ အင အစ အဆ အဇ အည အဋ္ဌ အဏ အတ အထ အဒ အဓ အန အပ အဖ အဘ အမ အယ အရ အလ အဝ အသ အဟ အအ အာ အား
VOWEL E - အိ - အီ - အီး
ကိ ကီ ကျိ ကျီ ကျီး ကျည် ကျည်း ကြီး ကြေး ကြည် ကြည့် ကြည်း ကွီ ချိ ချီ ချီး ချေ ချေး ချည် ချည့် ချည်း ခြည် ဂိ ဂီ ဂျီ ငြိ ငြီး စိ စီ စီး စည် စည့် စည်း ဆီ ဆီး ဆည်း ဆွိ ဆွီ ဇိ ဇီ ဇီး ညီ ညီး ညဉ့် ညည်း ညှိ ညှီ ဋီ ဌီ တိ တီ တီး တည် တည်း တြိ တြီ ထိ ထီ ထီး ဒိ ဒီ ဒီး ဒွိ နိ နီ နီး နည်း နှီး ပိ ပီ ပည်း ပြီ ပြီး ပြည် ပြည့် ဖိ ဖီ ဖီး ဖည် ဖြီး ဗိ ဗီ ဗြိ ဗွီ ဘိ ဘီ ဘီး မိ မီ မီး မည် မည့် မြီ မြီး မြည် မြည့် မြည်း မှီ မှီး ယီ ယီး ရိ ရီ ရည် ရည်း ရယ် ရှိ ရှီ လိ လီ လီး လှီ လှီး ဝိ ဝီ ဝှီး သိ သီ သီး သည် သည့် သည်း သျှိ သျှီ ဟိ ဟီ ဟီး ဟည်း အိ ဣ ၏ အီ ဤ အီး
VOWEL U - အု - အူ - အူး
ကု ကူ ကူး ကျူ ကျူး ကြူ ကြူး ခု ခူ ခူး ချူ ခြူး ဂု ဂူ ဂျူ ဂျူး ငု ငူ စု စူ စူး ဆု ဆူ ဆူး ဇူ ညု တု တူ တူး ထု ထူ ထူး ဒု ဒူ ဒူး ဓူ နု နူ နူး နှူး နျူ ပု ပူ ပူး ပျူ ပြု ပြူ ပြူး ဖု ဖူ ဖူး ဖျူး ဖြူ ဖြူး ဗူ ဗူး ဗျူ ဗြူး ဘု ဘူ ဘူး မု မူ မူး မြူ မြူး မှု မှူး မြှူ ယု ယူ ယူး ရု ရူ ရူး ရှု ရှူ ရှူး လု လူ လူ့ လူး လှူ ဝူ သု သူ သူ့ ဟု ဟူ ဟူး ဥ အူ ဦး
VOWEL AY - အေ့ - အေ - အေး
ကေ ကျေ ကျေး ကြေ ကြေး ကွေ ကွေ့ ကွေး ကျွေး ကြွေ ကြွေး ခေ ချေ ချေး ခြေ ခွေ ခွေ့ ခွေး ချွေ ချွေး ခြွေ ဂေ ဂွေး ငေး ငွေ ငွေ့ စေ စေ့ စေး စွေ စွေ့ စွေး ဆေး ဆွေ ဆွေ့ ဆွေး ဇေ ဈေး ဌေး တေ တေ့ တေး တွေ တွေ့ တွေး ထေ ထေ့ ထေး ထေရ် ထွေ ထွေး ဒေ ဒေး ဒွေး နေ နေ့ နွေ နွေး နှေး နွှေး ပေ ပေ့ ပေး ပြေ ပြေး ပြည် ပြည့် ပွေ ပွေ့ ပွေး ဖေ ဖေ့ ဖေး ဖြေ ဖြည့် ဖြည်း ဖွေး ​ဗေ ဗွေ ဘေ ဘေး မေ မေ့ မေး မြေ မြေ့ မြေး မွေ့ မွေး မှေး မြွေ မြှေး မွှေ မွှေ့ မွှေး ယေ ယှေ ရေ ရေ့ ရေး ရည် ရွေ ရွေ့ ၍ ရွေး ရှေ့ ရှေး ရှည် ရွှေ ရွှေ့ လေ လေ့ လေး လွေ လွေ့ လွေး လှေ လှေ့ လှေး ဝေ ဝေ့ ဝေး ဝှေ့ ဝှေး သေ သေး သေဉ် သွေ သွေ့ သွေး ဟေ ဟေ့ ဟေး ဧ အေ အေ့ အေး
VOWEL EARE - အဲ့ - အယ် - အဲ
ကဲ ကဲ့ ကယ် ကျဲ ကျယ် ကြဲ ကြယ် ကွဲ ကွဲ့ ကွယ် ကျွဲ ကြွယ် ခဲ ခဲ့ ခယ် ချဲ ချဲ့ ချယ် ခြယ် ခွဲ ချွဲ ငဲ့ ငယ် ငှဲ့ စဲ စွဲ စွယ် ဆဲ ဆည် ဆည်း ဆယ် ဆယ့် ဆွဲ ဆွယ် ဇယ် ဇွဲ တဲ တဲ့ တည် တည့် တည်း တယ် တွဲ တွဲ့ တွယ် ထဲ ထည် ထည့် ထယ် ဒယ် နဲ နဲ့ နည်း နယ် နွဲ့ နွယ် နှဲ နှဲ့ နှယ် နွှဲ နွှယ် ပဲ ပဲ့ ပယ် ပြဲ ပြဲ့ ပြယ် ပွဲ ပွဲ့ ဖဲ ဖဲ့ ဖယ် ဖြဲ ဖွဲ ဖွဲ့ ဖွယ် ဗြဲ ဘဲ ဘယ် ဘယ့် ဘွဲ့ မဲ မဲ့ မည် မည်း မယ် မယ့် မြဲ မွဲ မှဲ့ မှည့် ယဲ့ ရဲ ရဲ့ ရယ် ရွဲ ရွဲ့ ရွယ် ရှဲ ရှယ် ရွှဲ လဲ လဲ့ လည် လည်း လယ် လွဲ လွယ် လှဲ လှည့် လှည်း လှယ် လွှဲ ဝဲ ဝယ် ဝှဲ သဲ သဲ့ သည် သည်း သယ် သွယ် ဟဲ ဟဲ့ ဟယ် အဲ အဲ့ ဧည့် အယ်
VOWEL AU - အော့ - အော် - အော
ကော ကော့ ကော် ကျော ကျော့ ကျော် ကြော ကြော့ ကြော် ခေါ ခေါ် ချော ချော့ ချော် ဂေါ ဂေါ့ ဂေါ် ဂျော် ဂျော့် ငေါ ငေါ့ ငေါ် စော စော် ဆော ဆော့ ဆော် ဇော ဇော် ညှော် တော တော့ တော် ထော ထော့ ထော် ဒေါ ဒေါ့ ဒေါ် နော နော့ နော် နှော ပေါ ပေါ့ ပေါ် ပျော့ ပျော် ပြော ပြော့ ဖော ဖော့ ဖော် ဖျော့ ဖျော် ဖြော ဖြော် ဗော ဗော့ ဗော် ဗြော ဘော ဘော့ ဘော် မော မော့ မော် မျော မြော မြော့ မြော် မှော် မျှော မျှော့ မျှော် ယော ရော ရော့ ရော် ရှော ရှော့ ရှော် လော လော့ လော် လျော့ လျော် လှော် လျှော လျှော့ လျှော် ဝေါ သော သော့ သော် သောဝ် ဟော ဟော့ ဟော် အော ဩ အော့ အော် ဪ
VOWEL UN - အန့် - အန် - အန်း
ကံ ကံ့ ကဏ် ကန် ကန့် ကန်း ကမ် ကမ်း ကျံ ကျန် ကျန်း ကျမ်း ကြံ ကြံ့ ကြန် ကြန့် ကြမ်း ကွမ် ကျွမ်း ခံ ခံ့ ခန် ခန့် ခန်း ခမ်း ချန် ချမ်း ခြံ ခြမ်း ဂဏ် ဂန် ဂန့် ဂမ် ငံ ငံ့ ငန် ငန်း ငြမ်း စံ စံ့ စဏ် စန် စန့် စန်း စမ် စမ်း စွမ်း ဆံ ဆံ့ ဆန် ဆန့် ဆန်း ဆမ်း ဇန် ဇမ် ဈာန် ဉာဏ် ညံ ညံ့ ဌာန် တံ တံ့ တန် တန့် တန်း တမ်း တလ် ထံ ထန် ထန့် ထန်း ထမ်း ဒံ ဒဏ် ဒန် ဒန့် ဒန်း ဒါန်း ဒျန့် နံ နံ့ နန် နန့် နန်း နမ် နာမ် နမ့် နမ်း နှံ နှံ့ နှန့် နှမ်း ပံ့ ပဏ် ပဏ်း ပန် ပန်း ပျံ ပျံ့ ပျမ်း ပြန် ပြန့် ဖန် ဖန့် ဖမ်း ဖျံ ဖျန် ဖျန်း ဖြန့် ဖြန်း ဗန် ဗန်း ဘဏ် ဘန် ဘန့် ဘန်း မံ မဏ် မဏ်း မန် မန်း မာန် မာရ် မြန် မြန်း မှန် မှန်း ယံ ယန်း ယမ်း ယွမ် ရံ ရန် ရန်း ရမ် ရမ်း ရွမ်း ရှံ ရှန် ရှန့် ရှမ် ရှမ်း လံ လန် လန့် လန်း လမ်း လှံ လှန် လှန့် လှန်း လှမ်း လျှံ လျှမ်း လွှမ်း ဝမ် ဝမ်း ဝှမ်း သံ သံ့ သန် သန့် သန်း သမ် သမ်း ဟံ ဟန် ဟန့် အံ အံ့ အဏ် အန် အန်း အမ် အမ်း
VOWEL O - အို့ - အို - အိုး
ကို ကို့ ကိုး ကိုယ် ကိုယ့် ကျို ကျို့ ကျိုး ကြို ကြို့ ကြိုး ခို ခိုး ချို ချို့ ချိုး ခြိုး ဂို ဂိုး ဂျို ဂျိုး ဂြိုဟ် ငို ငို့ ငိုး ငြို ငြိုး စို စို့ စိုး ဆို ဆို့ ဆိုး ဇို ညို ညို့ ညိုး ညှို ညှို့ ညှိုတို တို့ တိုး ထို ထို့ ထိုး ဒို ဒို့ ဒိုး နို နို့ နိုး နှိုး ပို ပို့ ပိုး ပျို ပျို့ ပျိုး ပြို ပြိုး ဖို ဖိုလ် ဖို့ ဖိုး ဖျိုး ဖြို ဖြိုး ဗို့ ဗိုလ် ဗိုဟ် ဗျို ဗျို့ ဗြို့ ဗျိုး ဘို ဘို့ ဘိုး မို မို့ မိုး မျို မျိုး မြို မြို့ မြိုး မှို မှို့ မျှို့ ယို ယို့ ယိုး ရို ရို့ ရိုး ရှို့ ရှိုး လို လို့ လိုး လျှို လျှို့ လျှိုး ဝိုး သို သို့ သိုး သျှို သျှိုး ဟို ဟို့ ဟိုး အို အိုး
VOWEL IN - အင့် - အင် - အင်း
ကင် ကင်း ကျင် ကျင့် ကျင်း ကျဉ် ကျဉ်း ကြင် ကြဉ် ကွင်း ကြွင်း ခင် ခင်း ချင် ချင့် ချင်း ချဉ် ချဉ်း ခြင် ခြင်း ခွင် ခွင့် ခွင်း ချွင် ခြွင်း ဂင် ဂျင် ဂျင်း ငင် ငြင်း စင် စင်း စဉ် စဉ့် စဉ်း ဆင် ဆင့် ဆင်း ဇင် ဇင်း ဉာဉ် ညင် ညင်း ညှင်း ညှဉ်း တင် တင့် တင်း တြင်း တွင် တွင်း ထင် ထင့် ထင်း ထွင် ထွင်း ဒင် ဒင်း နင် နင့် နင်း နှင် နှင့် နှင်း နွှင် ပင် ပင့် ပင်း ပဉ် ပျင်း ပျဉ် ပျဉ်း ပြင် sounds like ပြင် ပြင့် ပြင်း ပွင့် ဖင် ဖင့် ဖင်း ဖျင် ဖျင်း ဖျဉ် ဖျဉ်း ဖြင် ဖြင့် ဖွင့် ဗင် ဗျဉ် ဘင် ဘင်း ဘွင်း မင် မင့် မင်း မဉ် မျဉ်း မြင် မြင့် မြင်း မှင် မျှင် မျှဉ်း မြှင့် မြွှင်း ယင် ယင်း ယဉ် ယဉ့် ယဉ်း ယာဉ် ယွင်း ယှဉ် ရင် ရင့် ရင်း ရဉ် ရဉ့် ရှင် ရှင့် ရှင်း ရှဉ့် ရှဉ်း ရွှင် လင် လင့် လင်း လျင် လျင်း လှင် လွင် လွင့် လျှင် လျှင်း လွှင့် ဝင် ဝင့် ဝင်း သင် သဉ် သင့် သင်း သွင် သွင်း သျှင် ဟင် ဟင့် ဟင်း အင် အင့် အင်း အဉ်
VOWEL OUN - အောင့် - အောင် - အောင်း
ကောင် ကောင်း ကျောင်း ကြောင် ကြောင့် ကြောင်း ခေါင် ခေါင်း ချောင် ချောင်း ခြောင်း စောင် စောင့် စောင်း ဆောင် ဆောင့် ဆောင်း ဇောင်း ညောင် ညောင်း ညှောင့် တောင် တောင့် တောင်း ထောင် ထောင့် ထောင်း ဒေါင် ဒေါင့် ဒေါင်း နောင် နှောင် နှောင့် နှောင်း ပေါင် ပေါင်း ပျောင်း ပြောင် ပြောင်း ဖောင် ဖောင်း ဖျောင်း ဖြောင် ဖြောင့် ဗောင် ဗောင်း ဗြောင် ဗြောင်း ဘောင် ဘောင်း မောင် မောင်း မြောင် မြောင်း မှောင် မှောင့် မြှောင် မြှောင့် ယောင် ယောင်း ရောင် ရောင့် ရောင်း ရှောင် ရှောင်း လောင် လောင်း လျောင်း လှောင် လှောင်း သောင် သောင်း သျှောင် ဟောင် ဟောင်း အောင် အောင့် အောင်း ဩောင်း
VOWEL INE - အိုင့် - အိုင် - အိုင်း
ကိုင် ကိုင်း ကျိုင်း ကြိုင် ခိုင် ခိုင်း ချိုင် ချိုင့် ချိုင်း ဂိုင် ဂိုဏ်း ငိုင် စိုင် စိုင်း ဆိုင် ဆိုင်း တိုင် တိုင်း ထိုင် ထိုင်း ဒိုင် ဒိုင်း နိုင် နိုင်း နှိုင်း ပိုင် ပိုင့် ပိုင်း ပြိုင် ပြိုင်း ပွိုင့် ဖိုင် ဖိုင့် ဗိုင်း ဗျိုင်း ဘိုင် ဘွိုင် မိုင် မိုင်း မြိုင် မှိုင် မှိုင်း ယိုင် ရိုင် ရိုင်း လိုင် လိုင်း လိုဏ် လှိုင် လှိုင်း လွိုင် ဝိုင် ဝိုင်း သိုင်း ဟိုင်း အိုင် အိုင့် အိုင်း
VOWEL AIN - အိန့် - အိန် - အိန်း
ကိန် ကိန်း ကျိန် ကျိန်း ကြိမ် ကြိမ်း ချိန် ချိန်း ခြိမ့် ခြိမ်း ဂိမ်း ဂျိန် ဂျိန်း ငြိမ် ငြိမ့် ငြိမ်း ငြှိမ်း စိန် စိန့် စိန်း စိမ် စိမ့် စိမ်း ဆိမ့် ဇိမ် တိန် တိန့် တိန်း တိမ် တိမ်း ထိန် ထိန့် ထိန်း ထိမ် ထိမ်း ဒိန် ဒိန်း ဒိမ်း နိမ် နိမ့် နှိမ် နှိမ့် ပိဏ် ပိန် ပိန်း ပိမ့် ပြိန် ပြိန်း ဖိန်း ဗိန် ဗိန်း ဘိန်း sounds like ဘိန်းမိန် မိန့် မိန်း မိလ် မြိန် မြိန့် မှိန် မှိန်း ယိမ်း ရှိန် ရှိန်း ရှိမ်း လိင် လိန်း လိမ် လိမ့် လိမ်း လှိမ့် ဝိဉ် သိင် သိန် သိဉ်း သိန်း သိမ် သိမ့် သိမ်း သိဟ် ဟိန် ဟိန်း ဣန် အိန် အိမ် အိမ့် အိမ်း
VOWEL OME - အုန့် - အုန် - အုန်း
ကုန် ကုန်း ကုမ် ကုံ ကုံး ကျုံ ကျုံ့ ကျုံး ကြုံ ကြုံး ခုန် ခုံ ခုံး ချုန်း ချုံ ချုံ့ ချုံး ခြုံ ဂုဏ် ဂုန် ဂုံ ဂျုံ ငုံ ငုံ့ ငုံး စုဏ် စုန် စုန့် စုန်း စုံ စုံး ဆုန်း ဆုံ ဆုံ့ ဆုံး ဇုန် တုဏ် တုန် တုန်း တုံ တုံ့ တုံး ထုန် ထုံ ထုံ့ ထုံး ဒုန်း ဒုံ ဒုံး ဒုလ် နုန့် နုန်း နုံ နုံ့ နုံး နှုန်း ပုဏ် ပုန် ပုန်း ပုံ ပုံ့ ပုံး ပုလ်း ပြုန်း ပြုံ ပြုံး ဖုန် ဖုန်း ဖုံ ဖုံး ဖြုန်း ဖြုံ ဗုန်း ဗုံ ဗုံး ဗြုန်း ဗြုံး ဘုဉ်း ဘုန်း ဘုမ် ဘုံ မုဉ် မုန် မုန့် မုန်း မုံ မြုန့် မြုံ မြုံ့ မှုန် မှုန့် မှုန်း မှုံ မြှုံး ယုန် ယုံ ယုံ့ ရုန့် ရုန်း ရုံ ရုံး ရှုံ့ ရှုံး လုံ လုံ့ လုံး လှုံ လှုံ့ ဝုန်း သုဉ် သုဉ်း သုန် သုန့် သုံ့ သုံး ဟုန် ဟုန်း ဟုံ ဟုမ်း ဟုံး ဥဏ် အုန်း ဥမ် အုံ ဥုံ အုံ့ အုံး sounds like ဥုံး
VOWEL OON - အွန့် - အွန် - အွန်း
ကွန် ကွန့် ကွန်း ကွမ်း ကျွံ ကျွန် ကျွန်း ကျွမ်း ခွံ ခွံ့ ခွန် ခွန်း ချွံ ချွန် ချွန်း ဂွမ်း ဂျွံ ဂျွမ်း စွံ စွန် စွန့် စွန်း စွမ်း ဆွံ့ ဆွန့် ဆွမ် ဆွမ်း ဇွန် ဇွန်း ညွန် ညွန့် ညွှန် ညွှန်း တွံ တွန် တွန့် တွန်း ထွန် ထွန့် ထွန်း ဒွန် ဒွန်း နွံ နွမ်း ပွန် ပွန်း ပြွန် ပြွမ်း ဖွံ့ ဖွန်း ဘွန်း မွန် မွန်း မွမ် မွမ်း မွှန် မွှန်း မွှမ်း ယွန်း ရွံ ရွံ့ ရွှံ့ ရွှန်း ရွှမ်း လွန် လွန့် လွန်း လွမ်း လွှံ့ ဝံ ဝံ့ ဝဏ် ဝန် ဝန်း ဝမ်း ဝှန် ဝှန်း သွံ သွန် သွန်း သွမ်း ဟွန် ဟွန်း အွန် အွန်း
SINGLE TONE - ET - အက်
ကက် ကျက် ကြက် ကွက် ကျွက် ကြွက် ခက် ချက် ခွက် ဂျက် ငှက် စက် စွက် ဆက် ဇက် ညက် ညှက် တက် တွက် ထက် ထွက် ဒက် နက် နှက် ပက် ပျက် ပြက် ပွက် ဖက် ဖျက် ဖွက် ဗြက် ဗွက် ဘက် မက် မဂ် မျက် မြက် မှက် မြွက် ယက် ယှက် ရက် ရွက် ရှက် လက် လဂ် လျက် ဝက် ဝဂ် ဝှက် သက် သွက် ဟက် အက် အဂ်
SINGLE TONE - OUT - အောက်
ကောက် ကျောက် ကြောက် ခေါက် ချောက် ခြောက် ဂေါက် ဂျောက် ငေါက် စောက် ဆောက် ဇောက် တောက် ထောက် ဒေါက် နောက် နှောက် ပေါက် ပျောက် ပြောက် ဖောက် ဖျောက် ဖြောက် ဗောက် ဗြောက် ဘောက် မောက် မျောက် မြောက် မှောက် မြှောက် ယောက် ရောက် ရှောက် လောက် လျောက် လှောက် လျှောက် သောက် sounds like သောက် ဟောက် အောက်
SINGLE TONE - IKE - အိုက်
ကိုက် ကျိုက် ကြိုက် ခိုက် ခြိုက် ဂိုက် ဂျိုက် ငိုက် စိုက် ဆိုက် ဆိုဒ် တိုက် ထိုက် ဒိုက် နိုက် နှိုက် ၌ ပိုက် ပိုဒ် ပြိုက် ဖိုက် ဗိုက် ဗျိုက် မိုက် မြိုက် မြှိုက် ရိုက် ရှိုက် လိုက် လှိုက် ဝိုက် ဝှိုက် သိုက် ဟိုက် အိုက်
SINGLE TONE - IT - အစ်
ကစ် ကျစ် ကြစ် ခစ် ခေတ် ချစ် ခြစ် ဂစ် ဂျစ် စစ် ဆစ် ဆွစ် ဇစ် ညစ် ညှစ် တစ် တွစ် ထစ် ဒစ် နစ် နှစ် ပစ် ပဇ် ပဉ် ပျစ် ပြစ် ဖျစ် ဖြစ် ဗျစ် မစ် မဇ် မေတ် မြစ် မျှစ် ယစ် ယဇ် ရစ် ရှစ် sounds like ရှစ် လစ် လဇ် လျစ် လှစ် ဝစ် ဝေသ် သစ် သေတ် သျှစ် ဟစ် အစ် အဇ်
SINGLE TONE - UT - အပ်
ကတ် ကဒ် ကပ် ကသ် ကျတ် ကျပ် ကြတ် ကြပ် ခတ် ခပ် ချဒ် ချပ် ဂါတ် ဂျတ် ဂျပ် ငတ် စပ် ဆဋ် ဆတ် ဆပ် ဇာတ် ဉတ် ဉာသ် ညပ် ညှပ် တတ် sounds like တတ် တပ် ထတ် ထပ် ဒသ် ဒြပ် ဓာတ် နတ် နပ် နှတ် နှပ် ပါဌ် ပတ် ပါဒ် ပပ် ပဗ် ပျပ် ပြတ် ပြသ် ဖတ် ဖျတ် ဖျပ် ဖြတ် ဗျဂ် ဗျတ် ဗျပ် ဗြတ် ဘတ် ဗဒ် မတ် မပ် မြတ် မှတ် ယာဒ် ယပ် ရတ် ရပ် ရသ် ရှပ် လတ် လဒ် လပ် လာဘ် လှပ် လျှပ် ဝပ် သတ် သဒ် သပ် သဗ် သသ် သျှတ် ဟတ် ဟပ် အဋ် ဩဋ် ဩတ် အတ် အပ် အဗ် အသ်
SINGLE TONE - ATE - အိတ်
ကိစ် ကိတ် ကျိတ် ကျိပ် ကြိတ် ချိတ် ချိပ် ဂိဇ် ဂိတ် စိတ် စိပ် ဆိတ် ဆိပ် ညိတ် တိတ် တိပ် ထိတ် ထိပ် ဒိဋ္ဌ် ဒိဗ် နိက် နိဂ် နိဋ္ဌ် နိဒ် နိပ် နိဗ် နိသ် နှိပ် ပိတ် ပိသ် ပြိတ် ပြိသ် ဖိတ် ဗိသ် ဗြိစ် ဘိက် ဘိတ် ဘိသ် မိစ် မိတ် မိသ် မြိတ် မှိတ် ရိက် ရိတ် ရိပ် ရှိတ် လိတ် လိပ် ဝိစ် ဝိဇ် ဝိတ် သိက် သိဒ် သိပ် ဟိတ် အိတ် အိပ် ဣစ် ဣဋ် ဣတ် ဣဒ် ဣသ်
SINGLE TONE - OAT - အုပ်
ကုက် ကုတ် ကုပ် ကုဗ် ကျုပ် ကြုတ် ခုတ် ခုပ် ချုပ် ခြုတ် ခြုပ် ဂုတ် ဂျုတ် ငုတ် ငုပ် စုတ် စုပ် ဆုတ် ဆုပ် တုတ် တုပ် တုသ် ထုက် ထုတ် ထုပ် ဒုက် ဒုဂ် ဒုတ် ဒုဗ် ဒုသ် နုပ် နုတ် နှုတ် ပုဂ် ပုစ် ပုတ် ပုဒ် ပုပ် ပုဗ် ပုသ် ပြုတ် ပြုပ် ပြုဗ် ဖုတ် ဖုသ် ဖြုတ် ဗုဒ် ဘုတ် မုက် မုခ် မုတ် sounds like မုတ် မြုပ် မှုတ် မြှုပ် ယုဂ် ယုတ် ရုက် ရုတ် ရုဒ် ရုပ် ရှုတ် ရှုပ် လုတ် လုပ် လှုပ် ဝုတ် သုက် သုတ် သုဒ် သုပ် သောပ် သုသ် ဟုတ် ဟုပ် ဥက် Sounds like ဥက် ဥစ် အုတ် ဥတ် ဥဒ် အုပ် ဥပ် ဥသ်
SINGLE TONE - OOT - အွတ်
ကွတ် ကွပ် ကျွတ် ကြွပ် ခွပ် ချွတ် ဂျွတ် စွတ် စွပ် ဆွတ် ဆွပ် ဇွတ် ညွတ် ညွှတ် တွတ် တွပ် ထွဋ် ထွတ် ပွတ် ပြွတ် ဖောဋ္ဌ် ဖွတ် ဖွပ် ဗွတ် ဘွတ် မွတ် မွှတ် ယွတ် ရွတ် ရွပ် ရွှတ် ရွှပ် လွတ် လွှတ် ဝဋ် ဝတ် ဝပ် ဝသ် သွတ် သွပ် အွတ်
Learn Myanmar Script
Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.
The Free Online Myanmar-English Dictionary with color coding and Burmese 1-2-3 Tone System © 2019-2022 is developed and maintained by Naing Tin-Nyunt-Pu.(နိုင်တင်ညွန့်ပု)